Umatshini wokugcwalisa, eCubitainer, Isikhongozeli saManzi esinqwenelekayo-Kaiguan
Uvavanyo lwevidiyo yoxinzelelo
HLOLA ETHU EZIPHAMBILI IMVELISO
Flexible kwaye ithambile, iyaShukuma kwaye ayisindi, ukunciphisa iindleko
ibhokisi yokutya ebhokisini
Semi-Collapsible uJerry unako
Indawo yethu yokusebenzela ixhotyiswe ngoomatshini be-4 bokubumba oomatshini (iModeli 25A); 2 iiseti othe tyaba koomatshini yokubumba ka 120g, 4 iiseti nkqo oomatshini ziphene yokubumba ka 125g, 2 iiseti nkqo ziphene yokubumba oomatshini 80g, 2 iiseti oomatshini ibhegi-ukwenza.
Sinokubonelela nge-1 litre ukuya kwi-50 yeebhegi zokujonga ibhokisi ebhokisini; Kwaye sinokubonelela ii-cubitainers ukusuka kwi-volum 1 ilitha ukuya kwi-25 yeelitha.
Sinesitokhwe kuzo zonke iibhegi zobungakanani obuqhelekileyo. Imigca yethu yemveliso isebenza iiyure ezingama-24.
Inkampani igubungela indawo ye-8000㎡
Iminyaka eli-12 yamava emveliso
INDAWO YOKUSHUMAYELA YOKUTHULA
4000㎡ igumbi elicocekileyo
Iimakethi kunye nokusetyenziswa
Isicoci sezandla . Ulwelo lokubulala iintsholongwane
Ijeli ye-Ultrasound yonyango
Ixesha lonyaka (I-Sake, isosi yesosi, iViniga)
Intoni ngaba abathengi bethu bathi?
ISipro lau Hong kong SAR
Umgangatho olungileyo kakhulu, yonke into isebenza njengoko kuchaziwe Ingxowa ethe nkqo incede ukunciphisa iindleko zokuhamba ngelixa zomelele kwaye zinzima njengoko kubonisiwe
IHattoriAkio Komura Singapho
UJohn wayeluncedo ngenene kwaye wasisebenzela ngobuchule ngonxibelelwano olungenasiphako Siya kuphinda sithenge kuye kwakhona. Enkosi ngenkxaso yakho!
Oko yasekwa, umzi-mveliso wethu uphuhlisa iimveliso zodidi lokuqala lwehlabathi ngokubambelela kumgaqo wobulunga kuqala. Iimveliso zethu ziye zaziwa ngokugqwesileyo kushishino kunye nexabiso lokuthenjwa phakathi kwabathengi abatsha nabadala ..
Ukupakisha iingxowa zehypochlo ...
Ukuphenjelelwa yi-COVID-19, kukho imfuno eyandayo yeemveliso zokulwa neentsholongwane ezifana nezibulala-ntsholongwane kunye notywala. Ukusukela ekuqaleni konyaka ka-2020, oomatshini bethu basebenza iiyure ezingama-24 yonke imihla kwintengiso yehypochlorous acid disinfectant kunye notywala. Sithumela ngaphezu kwe-100000 ii-b ...
Le yimveliso yethu entsha enoyilo lwenguqulo entsha. Ingxowa yenziwe ngeplastikhi eninzi. Uluhlu lwangaphandle (i-polyamide + polyethylene) lukhusela kwioksijini kunye nokufuma; Ubuninzi bayo kunye nokwakheka kwayo kungahluka ngokuxhomekeke kwiimfuno zomthengi okanye imveliso. Maleko yangaphakathi (polyethylene) ...
Ngakumbi nangakumbi abathengi bethu baqala ukusebenzisa cheertainer ukuzalisa iimveliso zolwelo. Ke yintoni eqinisekisayo? Yipakethe entsha yokupakisha edibanisa ukuguquguquka kweNgxowa kwiBhokisi kunye neenzuzo eziphuculweyo zeemveliso zokupakisha eziqinileyo okanye ezinqamlekileyo, ezenza i-cheeratainer ip ...